Headphones – Tagged "USD" – ICT.com.mm
Gamdias EROS M3 RGB Gaming HeadphoneK45,981
Gamdias EROS E3 RGB Gaming HeadphoneK39,133
RAZER BlackShark V2 Wired Gaming Headset + USB Sound Card FRML PackagingK262,000
ASUS ROG Throne Qi Gaming Headset StandK307,548
ASUS ROG Delta S Gaming HeadsetK548,976
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Exclusive RGB Streaming Effect Exquisite Earcup Facade Design Extra-Sized Ergonomic Earcup Layout Large 50mm Speakers Pliable Omnidirectional Microphone Unit Compatible To Designated Game Consoles Sensitivity: 104±3dB Impedance:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Exclusive RGB Streaming Effect Exquisite Earcup Facade Design Extra-Sized Ergonomic Earcup Layout Large 50mm Speakers Pliable Omnidirectional Microphone Unit Compatible To Consoles via Y-Splitter Cable Sensitivity: 102±3dB...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Frequency Response: 12 Hz – 28 kHz Impedance: 32 Ω (1 kHz) Sensitivity: 100 dBSPL/mW, 1 kHz Driver Size – Diameters: 50 mm Driver Type: Razer™ TriForce Titanium...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Interface: Wired Support Platform: PC, MAC Hi-Fi DAC: ESS 9118 Hi-Fi Amp: ESS 9118 Lighting: RGB Aura Sync: Yes Color: Black Cable: 2m Warranty: 1 Year ...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Interface: Wired Connector: USB-A, USB-C Support Platform: PC, MAC, PlayStation® 4, PlayStation® 5, Nintendo Switch Driver Material: Neodymium magnet Driver Size: 50mm Headphones Impedance: 32 Ohm Microphone...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Interface: Wired Connector: USB-A, USB-C Support Platform: PC, MAC, PlayStation® 4, PlayStation®5Driver Material: Neodymium magnet Driver Size: 50mm Headphones Impedance: 32 Ohm Microphone Sensitivity: -40...
Razer Barracuda X Wireless Multi-Platform Gaming and Mobile Headset (Quartz Pink)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ USB-C Wireless Multi-Platform Connectivity 250g Ergonomic Design Razer™ TriForce 40mm Drivers Earcups: Oval FlowKnit Ear Cushions Earpads Material: Ultra-soft FlowKnit memory foam Noise Cancelling: Passive noice cancelling...
Razer Opus X Active Noise Cancellation Headset (Green)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wireless circum-aural headset 40mm drivers 60 ms low latency connection Active Noise Cancellation (ANC) Integrated microphones Connectivity: Bluetooth 5.0 LEDs indicate whether the device is on, association...
Razer Opus X Active Noise Cancellation Headset (Quartz)
Razer Opus X Active Noise Cancellation Headset (Mercury)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wireless circum-aural headset 40mm drivers 60 ms low latency connection Active Noise Cancellation (ANC) Integrated microphones Connectivity: Bluetooth 5.0 LEDs indicate whether the device is on,...
Razer Kraken BT Headset Kitty Edition (Quartz)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wearing Style: Wireless Over Ear (Bluetooth) Driver Diameter: 40mm Mic Setup : Internal Beamforming Mics (2) Kitty Ears and Earcups Powered by Razer Chroma: Yes Frequency Response:...
HyperX HXS-HSCC1 Cloud Headset Carrying Case (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: ‎HyperX Color: ‎Black Form Factor: Case Item Height: ‎5.5 Inches Item Width: ‎7.25 Inches Product Dimensions : 22.23 x 18.42 x 13.97 cm; 385.55 Grams Item...
Logitech G431 (7.1) Surround Gaming Headset
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Driver: 50 mm Frequency Response: 20Hz-20KHz Impedance: 39Ω(passive), 5kΩ(active) Sensitivity: 107dB+/-3dB Microphone Pickup Pattern: Cardioid(Unidirectional) Microphone Size:6mm Microphone Frequency Response: 100Hz-20KHz Cable Length: 2m Weight:...
Logitech G331 Prodigy Gaming Headset (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Driver: 50 mm Frequency Response: 20Hz-20KHz Impedance: 39Ω(passive), 5kΩ(active) Sensitivity: 107dB SPL/mW Cable Length: 2m Weight: 280 g Dimension(H*W*D): 172*81.7*182 mm Warranty:2Years BE HEARD LOUD...
HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound USB Card (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand ‎HyperX Manufacturer ‎‎Kingston Technology Colour: ‎Black Item Height: ‎1.18 Inches Item Width: ‎0.72 Inches Product Dimensions : 6.78 x 1.83 x3cm; 104.33 Grams Item...
HyperX Cloud Ear Cushions (Cloud, Cloud X and Cloud II)-Black/Red
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Product Code: HXS-HSEP1 Replacement earpads made with high quality memory foam and velour. Replace your worn-out earpad cushions / ear cover / ear cups. Give your headset a...
Logiteth Lightspeed Wireless G435 Gaming Headset (Blue)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: G435 Play time: 18 hours Charging port: USB-C Charging cable: USB-A to USB-C Dimensions: 6.4×6.7×2.8 in (163×170×71 mm) Audio Drivers: 1.57 in (40 mm) Frequency response: 100...
Logiteth Lightspeed Wireless G435 Gaming Headset (White)
Logiteth Lightspeed Wireless G435 Gaming Headset (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: G335 Driver: 40 mm Plug and Play: 3.5 MM AUDIO JACK Length: 189 mm / 7.4 in Width: 180 mm / 7.1 in Depth: 79 mm / 3.1...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Immersive, true-to-life sound Adjustable headband and padded ear cushions provide comfort over long periods of use Flexible, retractable microphone boom for hands-free communication Integrated volume control with...
Steelseries Tusq In-ear Mobile Gaming Headset (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: Tusq Warranty: 1 Year Tusq gaming earbuds are designed with clear audio, upgraded mic quality, andacomfortable adjustable design to bring the all perks of...